Isco oo sheegay in Ronaldo uu yahay xidig wanaagsan, isagoo dhinaca kale ka jawaab celiyay hadal uu dhawaan sheegay Messi – Gool FM
(Real Madrid) 06 Sebt 2018. Francisco Isco ayaa wuxuu xaqiijiyay in saaxiibkiis hore kooxda Real Madrid ee reer Portugal Cristiano Ronaldo uu yahay xidig aad u wanaagsan.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu daboolka ka qaaday wareysi uu dhawaan laacibka Real Madrid ee Francisco Isco kaga hadlay saaxiibkiis hore Cristiano Ronaldo si uu ugu jawaab celiyo Lionel Messi.
Laacibka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argantina ee Messi ayaa wuxuu dhawaan ka warbixiyay in bixitaanka Cristiano Ronaldo Real Madrid laga dareemi doono hoos u dhac weyn balse Isco ayaa si weyn hadalkaas isaga diiday.
“Cristiano Ronaldo waa ciyaaryahan aad u wanaagsan laakiin hadii aan guuleysano waxay dhihi doonaan wax saameyn ah kuma yeelan, si la mid ah hadii aan guuldareesano waxay ina dhihi doonaan erayo kale”.
“Bixitaanka Cristiano Ronaldo waxay fursad weyn u noqotay xidigo badan aanan goolal badan dhalinin xili ciyaareedkii lasoo dhaafay sida Bale iyo Karim Benzema, taasoo la midcno ah inaan u xiisi doonin Ronaldo”.